Yahoo! Raadi Suuqgeyn ... Waad I lumisay! | Martech Zone
Yahoo! Raadi Suuqgeyn… Waad I lumisay!
Talaado, Nofeembar 27, 2007 Talaado, Nofeembar 27, 2007 Douglas Karr
Boostada Tooska ahi waa dhexdhexaad qaali ah. Sababtoo ah waa qaali, looma qaban karo si khatar ah. Waxaan u sheegi jiray macaamiishayda in fursadda ah inaan qof ku soo jiito dareenka Direct Mail ay si toos ah ula xiriirto masaafada u dhexeysa sanduuqa boostadooda iyo qashinkooda. Qeybta kaliya ee ka mid ah ololaha boostada tooska ah ee ka muhiimsan bartilmaameedka iyo gabalku waa awooda lagu fulinayo ololaha.
Maanta, waxaan si qurux badan u abuuray qayb Farriin Toos ah oo ka timid Yahoo! Raadinta Suuqgeynta. Dalabku wuxuu ahaa $ $ 75 amaah ah oo loogu talagalay suuqgeynta ereyada muhiimka ah Yahoo! mashiinka raadinta. Tan iyo markii aan hadda bilaabay a shabakad bulsheed oo loogu talagalay Veterans Navy, Waxaan ku sameynayey xoogaa tijaabo ah anigoo adeegsanaya qaar keyword ah.
Daabacadda saxda ah, dabcan, waa inaad u baahan tahay inaad dhigto $ 30 deebaaji aan la soo celin karin koontada. Taasi wali $ 45 qiimihiisu yahay qasabno aan adeegsan lahaa, in kastoo, markaa waxaan isku dayay inaan isqorto. Waxaan leeyahay isku dayay maxaa yeelay waxaa ila kulmay fariintan qaladka ah oo aan ka yarayn 4 jeer nidaamka diiwaangelinta iyo lacag bixinta:
Boostada Tooska ahi waxay leedahay hal shay oo la mid ah xayeysiinta. Waa inaad awood u leedahay inaad samayso alaabtaada ama adeeggaaga isla marka ay rajadu ka soo gasho albaabka. Awood la'aanta bixinta waxyeello ayaa ka badan tan aan la xayeysiin. Waxaan rajeynayaa in Yahoo! Ololuhu wuxuu ahaa olole muunad ah oo loo diray dad yar si ay u tijaabiyaan awoodda nidaamkooda u maareeyo diiwaangelinta iyo iibsashada ses laakiin runta ayaa laga yaabaa inay cagsigeeda tahay. Way iga lumeen! Kadib 4 isku day, ma laabanayo.
Yahoo! waxay u badan tahay inay kubixisay boqolaal kun oo doolar warqadan tooska ah. Iyo Agaasimaha Suuqgeynta saboolka ah, oo naqshadeeyay gabal cajiib ah, waxaa suuragal ah in lagu eedeeyo waxqabadka liita ee ololaha.
Mooyee, dabcan, Yahoo! dhacdo in la akhriyo qoraalkayga. 🙂
Tags: falxaabxaabshirkadda otomaatiga suuq geyntasuuqgeeyayaasha otomaatigaqiimeynta otomaatiga suuq geyntawarbixinta otomaatiga suuq geyntadib u eegista otomaatiga suuq geyntatijaabinta noocyo badanbaaritaanka boggasaxda ah is-dhexgalka
Ku baashaal calaamadaha… Dukaamada Indy Coffee
Nov 27, 2007 saacadu markay tahay 10:37 PM
Marwalba waan layaabaa marka shirkadaha waaweyn sidan wax u qaldaan. Nasiib ayey leeyihiin waxaad siisay iyaga afar fursadood, dadka badankood way joojin lahaayeen markii ugu horreysay ama labaad. Nasiib darrose "nin yaroo" haddii aan khalad sidan oo kale ah galno, macaamiisheenna mustaqbalka waa dhif inay nasiiyaan fursad labaad.
Nov 28, 2007 at 11: 59 AM
Haa, laakiin Tooska tooska ah waa qaali oo keliya haddii aan si sax ah loo qaban. Haddii si fiican loo qabtay, markaa waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah. Waxay ku kici kartaa lacag ka badan wax raqiis ah / bilaash ah sida suuqgeynta iimaylka, laakiin waxay u egtahay inay guuleysato. Waa wax la cabbiri karo, lana habeyn karo, waana la tijaabin karaa. Aan aragno raadiyaha ama TV-ga ay SAMEeyaan. (Sidaas ayuu yidhi khabiirka DM! 😉)
Nov 28, 2007 saacadu markay tahay 12:47 PM
Waan ku raacsanahay! Waxay ahayd inaan dhaho 'maalgashi muhiim ah' halkii aan 'qaali' lahaa. Runtii maahan wax kharash ah markii si sax ah loo dhammeeyo oo waxay kaa caawineysaa in dakhli aad u badan la wado. Heck, waxaan ahaa diyaar, diyaar iyo awood u leh inaan ka jawaabo qaybtaan!
Nov 29, 2007 at 11: 54 AM
Faallooyin wanaagsan. Kooxda suuqgeynta ee Yahoo ayaa dhawaanahan lumineysay dad badan oo ka mid ah dadkoodii ugu fiicnaa bilowga iyo tartamayaasha. Waxaan marwalba ka fikiri jiray mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee suuq geynta tooska ah waa Jay Abraham - laga yaabee inay isaga siiyaan wicitaan.